बिदेशमा रहेर देश बिकासमा के के कुराहरु आवश्यक रहेछन भन्ने कुरा धेरै नेपालीहरुले देखेका छन । विश्वमा तीब्र आर्थिक उन्नती गरिरहेका दुबई, कतार, बहराइन, मलेसिया आदि देशहरु देखे पछी हामी प्रबासी नेपालीले सपनामा देख्ने गरेको नेपाल कस्तो होला ? हामी नेपाललाई कसरी बिकाशित देश बनाउन सकौला ? भनेर हरेक नेपालीहरु सपना देख्छन ।
चैत्र २९, २०७३-सम्भवत: नेपालीले अव लोडसेडिङको समस्या भोग्नु नपर्ला । सरकारले लोडसेडिङ मुक्त बनाउन चालेको अभियानबाट देश बिदेश सबैतिर एउटा उत्साह थपेको छ । सरकारले छिट्टै नै अधिराज्यभर सदाको लागि लोड सेडिङ अन्त्यगर्दै उज्यालो नेपाल निर्माणको घोषणा गर्नुले अब मुलुकले बिकासको गति लिन्छ भन्ने विश्वास र उत्साह जनतामा छाएको छ ।
दुई वर्षदेखि अस्थायी टेन्टमै जिल्ला अस्पताल ›